Musika uye chigadzirwa Vagadziri |China Musika uye chigadzirwa Suppliers & Factory
Musika uye chigadzirwa
Gorofu Ngoro Battery
Hunhu Hwepamusoro Yakagadzirirwa Huru Hwekunze Battery Pack E...
Factory Sale Yakakwirira Kuchengetedza Kuita Lithium 48V 12V...
HESS 10KWh Simba Wall LiFePO4 Lithium Bhatiri ye...
AC Power Station Pure Sine Wave Inotakurika Powering Ca...
JGNE 1000W Inotakurika Power Station Emergency Power Su...
High kugona NCM 26650 3.6V 5000mah rechargeable ba...
Kupisa Kutengesa Rechargeable 30C Lifepo4 18650 3.2V 1100...
Rechargeable SLA Replacement Factory yakananga customiz...
JGNE Electric Passenger Driven Storage Forklift 25.6V 150AH 25.6V 450AH Lithium Bhatiri
Traditional sealed lead acid (SLA) mabhatiri anobva kuchizvarwa chekare chehunyanzvi.Izvo zvishoma nezvishoma zvinotsiviwa sezvo zvigadziriso zvemagetsi zvakagadziridzwa zvinogadzirwa uye zvinotengeswa.LiFePO4 mabhatiri anowanikwa kubva kuRechargeable Power Energy kutsiva chero lead acid bhatiri.RPE mabhatiri ari kumberi kwe lithium-ion bhatiri tekinoroji, inomiririra yepamusoro uye yakangwara simba sarudzo.
24V Lithium Ion Bhatiri 5KWH 7KWH 10KWH 24V 50Ah 100Ah 150Ah 200Ah LiFePO4 Bhatiri 48V Solar System Lithium Bhatiri.
Chigadzirwa chacho iLithium Iron Phosphate (LiFePO4) bhatiri rinopfuura rakavharwa sealed lead acid (SLA) mabhatiri maererano nekuita, Hupenyu hwenguva refu, huremu hwebhatiri, kuchengetedzwa kwepamusoro, kuchengetedzwa kwegirinhi kwezvakatipoteredza.Inoshandiswa zvakanyanya mu: electric forklift, electric stacker, AGV/RGV/MGV otomatiki mutakuri, robhoti, yakaderera-inomhanya mavhiri mana-mavhiri emagetsi mota, midziyo yekutaurirana, midziyo yekurapa uye zvichingodaro.
Wholesale Rechargeable Lithium Battery Yakagadzirwa kuChina LiFePO4 lithium bhatiri ine 25.6V 300Ah yeforklift
JGNE's new Lithium Iron Phosphate smart bhatiri inopa kuita kwakasiyana-siyana mumhando dzakasiyana-siyana dzinotakurika uye dzakamira, zvinosanganisira ngoro dzekurapa, marobhoti ekutumira, uye UPS masisitimu.
Deep Cycle Rechargeable 25.6V 120Ah Lithium Iron Phospahate LiFePO4 Batteries Pack For Forklifts 24V 120Ah
Hupenyu hurefu hwekutenderera, kuvimbika kwakanyanya, kuita kwakanaka kwemagetsi, uye kushamwaridzana kwezvakatipoteredza zvese zvinhu zvechigadzirwa ichi.
Zvekuchengetedza simba remagetsi forklift uye AGV.
1.Hupenyu hwenguva refu;
2.High chaiyo simba, mari yakawanda yekuita;
3.Kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza;
4.No ndangariro mhedzisiro, kuderera kuzvidzora;
5.Excellent rate discharge performance
6.The diversified product structure inopa imwe-stop solutions kune dzakasiyana siyana dzekushandisa.
Yekuchengetedza simba reKumba, Forklift gorufu ngoro, mabhatiri eUPS, uye mayacht
Simba guru 12.8V 21Ah LiFePO4 Electric Golf Trolley Lithium Battery 26650 3000mah Single cell 4S7P
1.The Best quality cell: pure standard A 26650 4000mah masero ebheteri , hupenyu hwe cyle hwemasero ndeye 2500 nguva uye chiyero chekubuda ndicho 3C.
2. Nzira yakanakisisa yekuenzanisa: maitiro ekufananidza akaderera kusvika ku5mV, 3mΩ,20mAh.
Yakakwira Amp 18650/26650 bhatiri Yekutanga NCM/LFP bhatiri rechargeable
Modular bhatiri inoreva kushandisa boka remabhatiri seakaparadzana mamodule, anogona kubatanidzwa munhevedzano kana kufanana pakati pekunze kana emukati mamodule kuti awedzere huwandu kana voltage.Imwe neimwe module ine BUILT-IN BMS.
wholesale china 12v 12.8V lithium ion lifepo4 bhatiri pack
Chengetedza simba rekushandisa: isingachinjiki simba UPS, yekutaurirana base station uye alarm zvakare inoshandisa lead-asidhi bhatiri sekuchengetedza simba, iyo inotsiviwa zvishoma nezvishoma ne lithium ion bhatiri.Aya mabhatiri anokoshesa kutenderera, uye iyo yakareba kwenguva refu, zviri nani.
12.8V 12Ah Lithium Ion Hupenyu Hurefu Cycle Lifepo4 Bhatiri Rinochajwa Lithium Ion Bhatiri 12V Chaja
Kunyangwe mutengo welithium iron phosphate bhatiri wakakwira 1-2 nguva yakakwira kupfuura yelead acid bhatiri parizvino, mutengo welithium iron phosphate bhatiri ingori 1/3 yeiyo yelead acid bhatiri muhupenyu hwesevhisi hwe5000 cycles.Kubva pakuona kwekugara kwenguva refu kwehupfumi, mari yekushandisa ye lithium iron phosphate bhatiri yakaderera.
12v 12.8v 100ah LiFePO4 SLA kutsiva bhatiri paki neBMS
Hupenyu hurefu hwekutenderera, gumi nguva dzeSLA bhatiri
Saizi diki, huremu huremu, huwandu hwesimba uye hushamwari hwenzvimbo.
Kushanda kwepamusoro, kugadzikana kwemagetsi, simba guru rinobuda.
Optional kutaurirana basa, smart control.
Rechargeable SLA Replacement bhatiri 12.8 v 28.8mAh LiFePO4 lithium-ion bhatiri paki ine BMS
Rechargeable SLA Replacement bhatiri 12.8 v 25.6mAh LiFePO4 lithium-ion bhatiri paki ine BMS
Chigadzirwa chacho iLithium Iron Phosphate (LiFePO4) bhatiri rinopfuura rakavharwa sealed lead acid (SLA) mabhatiri maererano nekuita:
Panguva yekubuda, iyo voltage inoramba iripo.
Hapana chikonzero chekupa trickle charger kuti bhatiri rirambe rakachajwa.
Huremu hushoma hwesimba rakafanana bhatiri hariite gasi panguva yekushandiswa Inochengetedza zita remagetsi pamusoro petembiricha yakakura.